Iziko leeLwimi lishukumisa amaz’omoya neMFM | Language Centre
Posted on 20/11/2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos
Kodwa ke le khosi ayikhange ingabingunobangela wokusitreseka okuthile, njengoko elo qela belijongene novavanyo lokwenza olukhulukazi: kwafuneka ukuba basebenzise konke abakufundileyo ukuqulunqa nokufunda ibhulethini yeendaba epheleleyo nekuya kuvakaliswa uluvo ngayo. Emva kweseshoni etshisa ibunzi yokuskribhulisha kwamasiba, yokwabelana ngamanqaku, yokutshofulwa kwamaphepha, neendaba ezishukumisa ihlabathi ekugqibeleni, iZiko leeLwimi lingatsho lithi abafundi bale khosi yeMFM le khosi imfutshane bayiphumelele emagqabini.
UMphathi wesitishi seMFM, uVeronique Smal, ulincomile iZiko leeLwimi ngekhosi leyo eyayiqulunqelwe injongo ethile, encoma nendlela eyaqhutywa ngayo. Ingxelo encumisa kangako evela kwisitishi ebesisoloko sivelisa iitalente ezinkulu kakade kwiminyaka emininzi edlulileyo yinto encomeka kakhulu! ILebhu yeZiko leeLwimi ilungiselela ukuqulunqwa ngobuchule kweekhosi ezifutshane ezilungiselelwe injongo ethile kanti neekhosi nje ezimfutshane ezifana nezi ziqulunqelwa amaqela aphuma kumaqumrhu oshishino nabantu nje ngokunjalo. Ukuba ufuna ukufundiswa wonwatyiswe ngaxeshanye qhagamshelana noMichelle Pieters.
Language CentreArticles in isiXhosa DialogosIziko leeLwimi lishukumisa amaz’omoya neMFM